उजेली [कथा] | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ मंसिर १४, शनिबार १०:५१ गते
एउटा साँघुरो कोठाको सानो खाटमाथि च्यातिएका थोत्रा र मैला थाङ्ना बिछ्याइएको छ । त्यसैमाथि मैला च्यादर ओढेर उजेली पल्टिरहेकी थिई । भुइँमा मैनबत्ती धिपधिप गर्दै बलिरहेको थियो । मैनबत्तीको मधुरो उज्यालोमा उजेलीका अनुहारमा नाचेका दुःखका रेखाहरु स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । कोठाको कुनामा अडेस लागेका रित्ता थाल र कचौराबाट उजेलीको अभाव र भोकलाई सजिलै मापन गर्न सकिन्थ्यो । उजेलीका पैँतालाका वेदनालाई कम गर्ने सारथिका रुपमा ढोकामा एक जोडी बिजोडी चप्पल जागा थिए ।
उजेलीको जीवनमा परेको अभावको भुमरीले उमेर नपुग्दै उजेलीका अनुहार बुढ्यौलीले स्पर्श गरेझैँ लाग्थ्यो । रात छिप्पिँदै जाँदा पनि उजेलीलाई आज किन हो कुन्नि निद्रादेवीले आफ्नो शरणमा बोलाइनन् । सुइय सुस्केरा हाल्दै उजेली खाटको बारमा अडेस लाग्छे । नचाहेर पनि विगतले आगोझैँ बनेर मस्तिष्क पोलेको अनुभव हुन थाल्छ उजेलीलाई ।
आफ्नो सुन्दर संसारबाट नचाहेर विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता पारेको त्यो कालो दिन उनको मस्तिष्कमा घुम्न थाल्छ । उनका मस्तिष्कमा आजसम्म पनि दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले केन्द्रबिन्दुको रुपमा रोजेको आफ्नो स्वर्गजस्तो परिवेशको अकल्पनीय दुर्दशा ताजै छ । प्रकृतिको उद्दण्डतासँग सिँगौरी खेल्ने सामथ्र्य नभएर आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित हुनु परेको गहिरो पीडा उजेलीको मनमा अझै यथावत् नै छ ।
आँगन पोलेर जुनीसँगै काट्ने वाचा गर्दै कमलको घरमा पसेदेखि उजेलीले त्यसैलाई नै आफ्नो संसार ठानेकी थिई । कमलजस्तो समझदार लोग्नेको छहारी पाउँदा उजेलीले जन्मघरसँगको बिछोड पनि भुल्न थालेकी थिई । कमलजस्तो समझदार र माया गर्ने आफ्नो जीवनमा पाउनु भनेको आफू संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानीझैँ लाग्थ्यो उजेलीलाई र प्रत्येक पल उजेली भगवान्सँग प्रार्थना गर्थी । हाम्रो संसारको रथ सधैँ यस्तै माया र विश्वासमा दौडिरहोस् । अझ फूलजस्तै छोरीको जन्मले खुसीको बर्साद भएको थियो त्यस घरमा ।
उजेलीले कल्पनासमेत गर्न नसकेको त्यो क्षण धर्तीले कम्पन गर्दै संसार उजाड पारेको त्यो राक्षसरुपी कालो दिन जसको वियोग जीवनभर निको नहुने एउटा घाउ बनेको छ उजेलीको जीवनमा । दैवको खेल राम्रो÷नराम्रो जस्तो भए पनि सहनैपर्ने बाध्यता थियो मानिसको । संसारकै सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलिए पनि मानिस आखिर दैवसँग कुस्ती खेल्न के नै सक्थ्यो र ?
उजेलीलाई त्यो दिन पटक्कै सम्झन मन छैन, तर भुल्न पनि सकेकी छैन । सपनाझैँ लाग्छ ती दिनका बज्रपात उसलाई । पीडा नै पीडाको पहाड खसेर आफ्नो थाप्लो किचिएको त्यो दिनको पीडा भोग्ने उजेलीलाई कति गाह्रो भयो होला ती पीडाहरु भुल्न, अनुमान पनि गर्न कठिन छ । धर्तीले अचानक कम्पन गर्दै ताण्डव नृत्य प्रस्तुत गरेको त्यो क्षणमा नै सकियो उजेलीको सुखी संसार पनि । अग्नि साक्षी राखेर सँगै जुनी काट्ने वाचा गरेको जीवनसाथी र मुटुको टुक्रा छोरीको प्राण दैवले हरेको त्यो दिन उजेलीलाई आफ्नो संसार अँध्यारो लाग्न थाल्यो । फूलरुपी आफ्नो संसारमा काँडाका बर्सात भएर सहनै नसक्ने गरी घोच्न थाले उजेलीलाई । उज्यालो त्यो आफ्नो संसारमा अँध्यारोले अधिकार जमाएको त्यो दिनको सम्झनाले उजेलीको आँखा भरिन थाले ।
मृत्यु अकाट्य कुरा हो, तर पनि आफ्नाहरुको वियोगले कति मर्माहत हुन्छ जीवन भन्ने भोगेकी उजेलीलाई आफ्नो रित्तो संसार हेरेर बाँच्ने चाहना पनि म¥यो । उजेलीका मनले रूँदै भन्थ्यो– म यो संसारमा बाँच्नुको के अर्थ भयो र ? कसका लागि बाँच्नु ? किन बाँच्नु ? जसको ओत लागेर घर पसेँ त्यही घर नै आज खण्डहर बनेको छ । त्यहाँको माटोबाट आफ्नाहरुको लासको गन्ध आइरहेको छ । त्यहाँको माटोलाई स्पर्श गर्दा पनि अथाह पीडाको बोध हुन्थ्यो । त्यसबेला उजेलीको मन पीडाले थिचेर थिलथिलो भएको थियो । आँसुका मूलहरु सुकेर आँखाहरु निरीह भई केवल हेरिराख्थे, जीवनसाथीका बन्द मुटु र फूलजस्तै कोमल छोरीको मायालु चञ्चले अनुहार । जस्तोसुकै बज्रपात परे पनि सामना गर्ने साहस जुटाउनु पर्दोरहेछ मान्छे भएर धर्तीमा पाइला राखेपछि । उजेलीले पनि दैवको कठोर निर्णयका सामना गर्दै साहस देखाई आफ्नै हातले जीवनसाथी र सन्तानको दाहसंस्कार गरेर । सधैँ मायाले सुमसुम्याउने उनका हातहरु कतिविघ्न साहस गरेर आफ्ना अमूल्य र प्रिय जीवनसाथी तथा सन्तानको शरीरमा आगो लगाए होलान् ? त्यत्रो साहस आफूमा कसरी आयो होला, उजेलीले अहिले पनि कल्पना गर्न सक्तिन ।
भग्नावशेष भएका पूरै गाउँहरुका माझमा अझै ठिंग उभिरहेको थियो त्यो पीपल । सायद, प्रकृतिको ताण्डव नृत्यले नछोएको त्यहीमात्र बाँकी थियो पीपल । गाउँको लथालिंग अवस्था देखेर पीपल अझै शोकमग्न भएझैँ लाग्थ्यो । उजेलीले पीपललाई हेर्दै दुःख पोखेकी थिई । पीपल, म यो उजाडिएको संसारको पीडा बोक्न सक्तिनँ । मेरो संसार रित्तो भयो, अब मलाई तेरो शरणमा जीवनलीला समाप्त गर्न अनुमति दे भन्दै फरियाको पासो बनाएर पीपललाई आफ्नो जीवन सुम्पिऊँ कि जस्तो पनि लागेको थियो । तर यस्ता असहज परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हालेर अघि बढ्न सक्ने साहस उजेलीले गरेकै हो । आफन्तका वियोग र आफ्नो रित्तो संसारको झलझली याद दिलाउने त्यो ठाउँसँग उजेलीलाई निराशामात्रै जागेर आयो । अथाह पीडाको बर्साद गराउने त्यो ठाउँ चटक्कै छाड्ने निर्णय लिई उजेलीले । त्यहाँ ओइरिने संघसंस्थाका राहत र दलालीपनसँग पटक्कै आश जागेन उसलाई । साथ दिने नै छैन भने राहतको के आशा राख्नु र ?
त्यहाँ भेलबाढीजस्ता बगेका पीडामा मलम लगाउन उजेली काँठ क्षेत्रमा पसी । राजधानीको केन्द्रबिन्दुभन्दा वरिपरिको काँठ क्षेत्रमा बस्दा गाउँतिर सजिलै खेतबारीको काम पनि पाइने र दया गरेर कसैले घरमा पनि बास दिन्छन् भन्ने आशले मनको पीडा भुल्न र अब आफ्नै लागि बाँच्ने संघर्ष गर्न काँठ छिरेकी उजेलीलाई कामको दुःख त भएन । खेतबारीमा काम गर्ने, बस्तुभाउ चराउने, लुगा धने, भाँडा माझ्ने कामको उसलाई ओइरो लाग्थ्यो । काम गरेर मन जितेकै कारण गाउँकै सुब्बा साहेबको घरमा भैँसी गोठालो बस्ने काम पनि पाएकी थिई । सुब्बाको जागिरबाट रिटायर्ड भएका तेजनारायणलाई सबैले सुब्बा साहेब भनेर चिन्दथे । बुढ्यौली लागेर अल्लि कमजोर भएका सुब्बाका छोराहरु विदेश र छोरीहरु बिहे गरेर गएपछि दुईवटा लैनो भैँसी, बीस मुरी धान फल्ने खेत, बाह्र–तेह्र मुरी मकै फल्ने बारीको काम गर्ने मान्छे भएन । पहिले कामदार धेरै पाइन्थे, अहिले युवाजति कि सहर कि विदेश । गाउँका खेतबारी न बाँझै राख्नु न त आफुले खनजोत गर्न सक्ने तागत हुनु, यस्तो समस्यामा परेका सुब्बालाई उजेलीजस्तो काम गर्ने मान्छे पाउनु ढुङ्गा खोज्दा देवता मिल्यो भनेझैँ भयो । त्यसमा सुब्बा र उसकी श्रीमती दुवै खुसी भए । सुब्बिनीले उजेलीलाई पुरानो घरको एउटा सानो कोठा, केही जडौरी लुगाफाटा, केही भाँडाकुडा र रासन दिएर बसोबासको चाँजोपाजो मिलाइदिएकी थिइन् ।
विगतका भालाझैँ रोप्ने पीडा र वर्तमानमा आइपुग्दा बाँच्नका लागि गरेका संघर्षको सम्झनाले उसका आँखा थाहै नपाई जलाशय बनिसकेछन् । उजेली च्यादरले आँसु पुछ्दै वरिपरि हेर्न थाल्छे, जताततै अँध्यारो छाएको थियो । मैनबत्तीले पनि त कसैको संसारलाई उज्यालो पारेर आफ्नो आयु सकाइसकेको हुन्छ । त्यही अँध्यारो रातमा उजेलीले आँसु पुछी । सायद त्यो आँसु कसैले नदेखोस् भनेर होला, मैनबत्तीले पनि आफ्नो लीला खत्तम पारेको ! खाटको बारबाट अडेस लाग्न छाडेर मैलो च्यादरभित्र गुटमुटिएर उजेली गोडाहरु लम्पसार पार्दै फेरि सोच्न थाल्छिन् । त्यतिखेर उनका आँखामा आसु छैन र उनको मन विगतका पीडामा डुबुल्की मारेर कमजोर बनेको छैन । उनमा अथाह ऊर्जा पलाएर आएझैँ भान हुन थाल्छ । उनको मनले भन्छ– धन्यवाद ! भूकम्प तैँले त मलाई बाँच्नुको अर्थ सिक्ने अवसर दिइस् । एउटी नारीलाई पलपल सधैँ अरुकै लागि बाँच्नुपर्ने परम्परा तोड्ने साहस दिइस् । सानो हुँदा नारी आमाबुबाका लागि उनीहरुकै रेखदेखमा बाँच्नुपर्ने, बिहेपछि लोग्ने र बुढेसकालमा छोराछोरीको रेखदेखमा बाँच्नुपर्ने, वास्तवमा एउटी नारीले आफ्नो लागि बाँच्ने कहिले ?
सायद भूकम्प नआइदिएको भए म पनि लोग्ने र छोरीका लागि बाँच्थेँ होला ! उनीहरुको खुसीमै आफ्नो जीवन देख्थेँ होला र बाँच्नुको अर्थ पनि । सधैँ अरुका लागि बाँच्नुभन्दा एउटा नारीले पहिले आफ्नो लागि बाँच्न र आफ्नै लागि संघर्ष गर्न सिक्न पर्दोरहेछ भन्ने विचारले उजेलीको मस्तिष्कमा नागबेली खेल्न थाल्छ । एकपटक उनी अतीत भुलेर अँध्यारोमै भए पनि मुस्कुराउँदै भन्छिन् । सलाम भूकम्प ! तैँले मलाई बाँच्नुको अर्थ सिकाइस् । हो, अब म पहिले आफ्नो लागि बाँच्ने संघर्षको मैदानमा दौडिँदै छु ।
उजेलीका अनुहारमा पलाएका मुस्कान र उनको प्रगतिशील विचारलाई त्यो कोठाको अँध्यारोमा कसैले देख्न त सकेन, तर अब सधैँ उसका संघर्षका पाइलाहरु प्रगतिपथमा लम्किरहेको भने अवश्य देख्नेछ समाजले र बुझ्नेछ समाजले उजेलीबाट बाँच्नुको अर्थ पनि ।